Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro
Taratasy fifirana tsy levon'ny rano
2017-05-11 @ 20:40 in Andavanandro
Zavatra iainana saingy toa tsy misy mpiresaka nefa dia tena manimba ny tontolo iainana mihitsy, satria manentsina tsy araka ny tokony ho izy ny fantsona natokana izorany. Efa nahatsikaritra ihany aho fa tsy tonga saina loatra, lasa mivalombalona be tsy mety lasan'ny rano ny taratasy vao avy nifirana. Efa nametraka fanariana taratasy manokana mihitsy na dia ny orinasa aza, noheveriko ho an'ny taratasy tsy natokana ifirana saingy noho ny tsy fahatakarana na fahalaniany dia mampiasa taratasy hafa no anton'io fanariana taratasy io, hay diso tanteraka ny hevitro fa tena natao ho an'ny taratasy natokana ifirana mihitsy io fitaovana fanrariana taratasy eo anilan'ny toeram-pangerena mihaja io, mihaja amin'ny lafiny madio moa izany.
Ny mpivarotra mihitsy amin'izay no miteny hoe ireto taratasy fifirana ireto tsy levon'ny rano fa mora ny vidiny fa ity ihany no taratasy fifirana levon'ny rano saingy lafo dia lafo. Dia lasa ny saina, fa angaha tsy natao ho levon'ny rano ny taratasy fifirana no lasa maro dia maro karazana ireo tsy mety levon'ny rano ka lasa misy daba natokana ho azy mihitsy? Moa ve tsy lasa fitaka ho an'ny rehetra izany taratasy fifirana tsy levon'ny rano izany? Ary ny fanontaniana farany: Eto Madagasikara irery ve no misy ireto taratasy fifirana tsy levon'ny rano ireto sa be koa ireo firenena misy izany tranga izany? Ny Malagasy any am-pielezana ihany no afaka mamaly izany fanontaniako izany angamba...
Jentilisa 11 mey 2017
1 2 3 ... 25 26 27 Manaraka»